IINDIDI EZINGAMA-21 ZEDRIVEWAYS (EZONA ZICWANGCISO ZOYILO) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Iindidi ezingama-21 zeDriveways (ezona ziCwangciso zoyilo)
Iindidi ezingama-21 zeDriveways (ezona ziCwangciso zoyilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu malunga neentlobo ezithandwayo zokuhamba ngeendlela ezibandakanya imibono yoyilo, iindleko kunye neenzuzo kunye neengxaki.
Iidriveways ziyinto esetyenziswa phantse yonke imihla! Nokuba uza kwaye uhamba ngemoto yakho okanye ufosholoze ikhephu kwindlela yokuhamba uthatha ukonakala okukhulu. Ke ngoko ukulinganisa zonke izinto ezilungileyo nezingalunganga zeentlobo ezahlukeneyo ezikhoyo ziya kukunceda ufumane indlela efanelekileyo ekhayeni lakho! Ukwazi kunye nokhathalelo olufanelekileyo lokuhamba kwakho kwayo nayiphi na into enokunika obona bomi bude kunye nokugcina kujongeka kukuhle.
Kuqala kuyakufuneka uthathe isigqibo ngezixhobo zokwenza umendo uphume. Oku kunokuvela kwizitena ukuya kumdaka nayo yonke into ephakathi. Kulungile ukugcina engqondweni uhlahlo-lwabiwo mali, imo yezulu, indlela oza kuyisebenzisa ngayo, kunye ne-aesthetics onqwenela ukuba nayo. Zonke ezi zinto ziya kudlala indima ekusebenzeni kwendlela yokuqhuba. Emva kokukhetha ubungakanani kunye neemilo zendlela yokuhamba kuya kuba yimpepho.
Ikhonkrithi vs Asphalt Drayivu
Itha kunye neChip Driveway
Udongwe lweBrick Paver
Ukungenelela kweendlela zokuhamba
Ukutyunyuzwa kweBasalt Driveway
Ukungcola kwindlela yokuhamba
Ikhonkrithi kunye neGrass Driveway
Iglasi yokuphinda yenziwe kwakhona
Izinto eziHlanganisiweyo zokuqhuba
Iindidi zeLitye leGravel zeDriveways
Indlela egoso egoso
Ukuqhutywa kweekhonkrithi lukhetho oluqhelekileyo lokuvulwa kwendlela. Olu hlobo lokuqhuba luya kubonelela ngezibonelelo ezimbalwa! Ukuqina komgaqo wekhonkrithi wokuqhuba kukhethekile, sesinye sezizathu eziphambili zokuba uninzi lwabantu luxhomekeke kolu khetho. Ikhonkrithi yokuhamba ngemoto iya kuhlala iminyaka engama-40 ngaphandle kwesondlo, ukulungiswa, okanye ukutshintshwa. Ikhonkrithi inokumelana nokusetyenziswa kwemihla ngemihla, okuluncedo kuba uninzi lwabantu luya kusebenzisa iindlela zabo zokuhamba okanye imoto ihleli kuyo yonke imihla.
Ukuzinza -Ukuba nje ikhonkrithi yokuhamba ifakwe ngokuchanekileyo, kufanele ukuba ibekho kwiminyaka ezayo. Ezona zinto ziphantsi kuphela kwikhonkrithi kukuba zibala ngokulula, kwaye izisombululo zokucoca indawo ezinokubangela ukonakala ngokukhawuleza. Ukongeza, inkqubo yokumisa inokuthatha iintsuku ezimbalwa, nto leyo ethetha ukuba akukho ndlela yendlela eya kusetyenziswa ngalo maxesha. Tyelela eli phepha ukuze ufunde okungakumbi malunga indlela eshushu iinkqubo kubandakanya ezo zenziwe ngekhonkrithi.
Ixabiso-Ixabiso lentengo lekhonkrithi lilungile kunye noluhlu lweedola ezi-3 ukuya kwezi-10 ngeenyawo zenyawo nganye.
Ulondolozo -Ukuba ufumana ikhonkrithi yokuhamba ngendlela, ngamanye amaxesha kufanelekile ukuba kusetyenziswe uphawu lwekhonkrithi yokuhamba ngendlela. Le mveliso iyakuchitha imveliso yeemveliso kunye nokunyusa ukubonakala kwekhonkrithi ngokongeza into ecwebezelayo. Inkqubo yokutywina ikhonkrithi yokuhamba ngemini enye, ayingomsebenzi onzima kakhulu, kwaye ayifuni zinto zininzi ezibizayo.
Ukutywina-Xa ukhetha isitywina esihamba ngendlela, umntu kufuneka aqwalasele ukhuseleko, inkangeleko kunye nokusebenza. Ukuxhathisa kwesiliphu kuya kuba yinto enkulu esekwe kubungakanani bento enayo ikhonkrithi. Isitywina sokujonga okumanzi siya kuba sesona sityibilikayo ngelixa isitampu siza kubonakala sifanane kodwa sibe sityibilika. Ukuxhathisa isiliphu okuphezulu ukutyibilika okutyibilikayo okutyibilikayo okanye ukongeza izongezo ezichaseneyo nescid kwisitywina kuya kuba yeyona nto ibheja kakhulu. Inqanaba lokuqaqamba liya kuchaphazela nokubonakala kwesamente. Ngokubhekisele kwintsebenzo, esekwe kwimveliso, isitywina iya kuthi yongeze iminyaka eyi-1 ukuya kwe-3 kubomi bekhonkrithi. Kwiimeko ezininzi, isitywina esinexabiso eliphantsi siya kuhlala ixesha elifutshane emva koko iimveliso eziphezulu zexabiso.
Xa ungena nzulu kudidi lwembonakalo yendlela yokuhamba enesitampu sekhonkrithi yindlela yokhetho enceda kwiimpawu zokuhombisa. Ikhonkrithi enesitampu yindlela entle ebiza iindleko yokwenza umzila wendlela ubonakale ngathi ayikho. Eli nqaku liza kukuvumela ukuba utshintshe umbala okanye iipateni zekhonkrithi ngelixa usafumana ukufumaneka kwekhonkrithi etyiweyo xa kuthelekiswa nepavumente nganye. Ukunyathela ikhonkrithi kuya kuvumela ukubonwa okuhle okufana ne-cobblestone, ilitye lasentsimini, kunye nezitena. Oku kuyakugcina ixabiso elifanayo ngokubanzi lekhonkrithi ngenkangeleko eyahlukileyo kuyo.
Ukugcinwa kunye nobude bobomi kuya kufana neendlela eziqhelekileyo zekhonkrithi. Ikhonkrithi enesitampu iya kusetyenziswa rhoqo kwiimeko apho i-aesthetics kunye nohlahlo-lwabiwo mali lubalulekile kumsebenzisi. Umzekelo ukuba ujonge ukwenza indlela yezitena kwaye ixabiso liphuma nje ukuba liphezulu kakhulu, ukunyathela ikhonkrithi ukuze ifane nezitena kuya kuba yeyona ndlela ilungileyo yokufumana okona kulungileyo kwihlabathi liphela.
I-Asphalt driveways lukhetho olufikelelekayo ngakumbi olusetyenziswa ngokubanzi. I-Asphalt driveways yenziwa ngezinto ezifana nesamente ye-asphalt, amatye kunye neesanti. Le mveliso iza ngombala omnyama kuphela, ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yi-blacktop.
Nangona i-asphalt ingakuvumeli ukukhetha umbala okanye naluphi na ulwenziwo, ixabiso eliphantsi yinto ebonakalayo. Iindleko ze-asphalt driveway zihlala ukusuka kwi- $ 3 ukuya kwi-5 yeenyawo ngonyawo wesikwere. I-asphalt ngokubanzi inexabiso eliphantsi ukufakela ikhonkrithi, nangona kunjalo iya kufuna ulondolozo ngakumbi ngakumbi kwiindawo ezinemozulu ebandayo.
I-Asphalt yoma kwaye ihlale nje kwiiyure ezimbalwa. I-asphalt nayo iyimveliso enokulungiswa ngokulula kunye nokuqina okuhle kumaqondo obushushu atshintsha useto. Ngelishwa, i-asphalt iya kufuna ukuthengiswa yonke iminyaka engama-3-5 kunye nokuvuselelwa rhoqo.
Ikhonkrithi kunye ne-asphalt driveways zimbini zeendlela ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zokuqhuba. Kungenxa yokuba ixabiso elithelekiswa nobude bobomi liphakathi kwaye yinto abantu abaninzi abanokuyifumana okanye abakulungeleyo ukuchitha ixesha elide. Iindlela eziqhutywa ngekhonkrithi ziya kuba lixabiso elincinci kune-asphalt, eyenza i-asphalt ithandwe ngakumbi kuhlahlo-lwabiwo mali lomntu ngamnye.
Inkangeleko ye-asphalt ukuba intle esisiseko, iza ngombala omnyama kuphela, yiyo loo nto ukufuna ubuhle ngakumbi befuna abantu kunokwenzeka ukuba bahambe ngokhetho lwekhonkrithi, ngenxa yokhetho onalo ngakumbi ngemibala kunye nezimbo. Enye into xa ukhetha phakathi kwekhonkrithi kunye ne-asphalt lixesha lokufaka. Ikhonkrithi inokuthatha iintsuku ukuba zome ngelixa i-asphalt ithatha iiyure ezimbalwa. Oku kuthetha ukuba iimoto ezihlala zihlala kwindawo yokuhamba ziya kususwa kuphela okwexeshana. Ngokusekwe kwiimfuno zakho ukongeza kwindawo okuyo kuya kunceda ukhethe phakathi kokhetho olukhulu lwekhonkrithi kunye ne-asphalt driveways.
Itha kunye ne-chip driveway lixesha eliqhelekileyo, kodwa isasetyenziswa ngokuxhaphakileyo. Oku kwenziwa ngesiseko segrabile, umaleko lwamatye akhululekileyo. Ukusuka apho ezo zinto zisongelwa kwi-asphalt ukuyigqiba. Olu hlobo lwendlela yokuhamba luyenye indlela eya kwi-asphalt driveway xa iindleko zixhalabisa ngaphandle kokuthotywa kwindlela yonke eya kwigrabile, kuba iyadibanisa izinto ezimbini. Akukho sondlo sininzi siyimfuneko kwitela kunye ne-chip driveway, kwaye ukutywina akuyomfuneko.
Ngelishwa, i-tar kunye ne-chip driveway iya kuba semngciphekweni wokususwa kwekhephu. Ngamanye amaxesha amanye amatye aya kuba ziindawo ezingafanelekanga kwaye ashiye imingxunya, kodwa zihlala zilungile. Ngokwesiqhelo, i-tar kunye ne-chip driveway iya kuhlala malunga neminyaka esi-7 ukuya kweli-10, kwaye emva kokuba iminyaka esi-7 ukuya kweli-10 inyukile, ukongeza olunye umaleko lwamatye kunye ne-tar iya kwanela ukuyibuyisela ebomini, ingathathi mali okanye ixesha elininzi . Iindleko zetar kunye ne-chip driveway zimalunga ne- $ 2 ukuya kwi-5 yeedola ngeenyawo, ekunene ejikeleze amaxabiso afanayo ne-asphalt driveways.
Isitena sasiyipavile eyayisetyenziswa kakhulu xa beqala ukuphehla iidriveways kunye nezitrato, oko kuyinika ukubukeka kweklasikhi okufunwa ngabantu abaninzi. Ngelixa le ndlela iza kongeza ukujonga okungaphelelwa lixesha, ukubetha, kuya kubetha isipaji kunzima kakhulu xa kuthelekiswa nekhonkrithi eqhelekileyo okanye i-asphalt driveways. Izitena zibonelela ngemibala eyahlukeneyo kunye nezinto ezenziwayo, ezenza ukuba idriveway ibe yeyakho ngokupheleleyo.
Ukuqina ayisiyonto intle kwintengiso, ezinye izitena zinokuqhekeka, zitshintshe okanye zaphule. Le nto ithethwayo inokuthi itshintshwe ngokulula ngaphandle kokulungisa yonke indlela, eyenza ulungiso olulula nolungabizi kakhulu. Ukugcina kufuneka ucwangcise ukuhlamba indlela amaxesha ngamaxesha.
Ukutywina isitena kuya kunika esona siphumo siphezulu kodwa kuya kongeza iirandi ezimbalwa kwixabiso. Ukuba itywiniwe ngokufanelekileyo kwaye inyamekelwa kwindlela yezitena inokuhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-25! Nangona ufakelo lunokuyenza ngokwakho iprojekthi, ifuna uninzi lomsebenzi wezandla.
Ukuqesha umntu oza kwenza lo msebenzi kuya kubiza imali eninzi kodwa kuya kuthetha ukuba imisebenzi iya kwenziwa ngokufanelekileyo eya kuchaphazela ubude bobomi kunye nokubonakala komgaqo. Ixabiso lendlela yezitena iya kusuka kwi-10 yeedola ukuya kwi-30 yeenyawo ngonyawo wesikwere kuxhomekeke kufakelo kunye nezinto ezikhethiweyo.
Ukuhamba ngepavile kuya kusetyenziswa iipeyinti ezinqamlezileyo ezenziwe ngezinto ezinjengekhonkrithi okanye isamente. Iipavile ziya kufumaneka kuluhlu lweemilo, ubungakanani, iitayile zendlela, ngokusisiseko ukhetho lubekelwe kuphela kwimibono yakho yoyilo. Ngenxa yomgangatho odibeneyo wepheyiji, isantya sokufakwa kunye namandla endlela yokuhamba kakuhle kakhulu!
Olu hlobo lwendlela yokuhamba luya kubongoza ngobuhle kuyo nayiphi na imeko ngenxa yeendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Iipavile azizukufuna ukugcinwa okuninzi, ukutshayela nje apha naphaya. Ngamanye amaxesha ukhula luya kutyibilika phakathi kweentanda, kodwa lurhole nje kwaye aluyi kudala ngxaki. Ukuba kukho nawaphi na amabala ayenzekayo, kukho izinto ezahlukeneyo zokucoca ikhonkrithi ezinokukunceda ukucoca umphezulu.
Ngokwesiqhelo, ukuba yonke into yenziwe ngokuchanekileyo kwindlela yokuhamba ekhonkrithi inokuhlala ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-50! Kuxhomekeke kwiziphawuli ozikhethileyo ziya kutshintsha kakhulu indleko. Ezinye iiparethi zizodwa ziya kuxabisa malunga ne-3 ukuya kwi-10 yeedola ngeenyawo, kodwa kuxhomekeke kwisitayile kunye neendlela zokufaka, ukufakela ixabiso kunokutsiba ukuya kuthi ga kwi-30 ukuya kwi-40 yeedola ngonyawo wesikwere.
Izitena zodongwe azomelele kangako kunekhonkrithi kodwa ziyafikeleleka kwaye zenza indlela ekhangelekayo. Zakhiwe ngeefomula eziphiliswa ubushushu ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa ubukhulu becala zixande. Kukho uluhlu olubanzi lweentlobo zoyilo onokuzikhetha kumdlalo wasekhaya wesitayile sanamhlanje, sangoku okanye sendabuko.
Ukungenelela kwendlela yokuhambisa indlela kunika ikhubalo lehlabathi elidala elilungele ukubhenela kwikhaya. Izinto ezisemgangathweni zokudibanisa iipavile zakhiwe ngekhonkrithi. Zomelele, zibonelela ngendawo ezinzileyo yokuhamba kwaye zifuna ulondolozo oluncinci ngaphandle kokutywina yonke iminyaka embalwa.
Iindleko zokudibanisa iipakethi ziqala ukusuka kwi-6 ukuya kwi-8 zama-8 zenyawo zenyawo. Nangona kunjalo, kukho iintlobo ngeentlobo zabenzi kwaye iindleko zakho ziya kuxhomekeka kwizinto ozikhethileyo kunye neendleko zabasebenzi kunye nofakelo lendawo.
IiCobblestone driveways zinika imbonakalo yakudala nangaphezulu, kwaye uphawu olongezwe ngakumbi liphezulu kwithegi yamaxabiso. Ukuba ucinga ukuba ukufakela kwakunzima kwizitena kwakunzima, linda ude ubone ubumnandi bokuphosa ngetshe! Into enhle malunga ne-cobblestone kukuba nayiphi na into yokunxiba kunye neenyembezi ezisiwe kuyo inika ngaphezulu (simahla) uphawu kwilitye.
Ulondolozo ekuphela kwalo olu luza kudinga ukutsala naluphina ukhula oluzama ukuntywila kwintanda. Ngokufanayo kwisitena ixesha lokuphila lifikelela kwiminyaka engama-25! Ngelishwa, ixabiso kwi-cobblestone liya kukuqhuba malunga ne-20- $ 70 ngeenyawo zenyawo. Oku kubonakala kwiindawo eziphakamileyo okanye xa abantu baneendlela ezifutshane kakhulu zokuhamba, ngenxa yeendleko eziphezulu.
Ukutywina kunye nokuhlamba i-cobblestone kuya kuba ngcono ukunceda ukuthengwa okukhulu kuhlala kujongeka kulungile ixesha elide. Ngamanye amaxesha ukusebenzisa i-cobblestone njenge-accent, inlay okanye umda kuya kukunceda ukwazi ukusebenzisa imveliso ngaphandle kokutshabalalisa uhlahlo-lwabiwo mali.
Iigravel driveways yenye yeendleko zokuhamba ngobuhlobo, kuphela phezulu kuneendlela zendalo ezinje ngengca okanye ubumdaka. Ezi ntlobo zeendlela ezixhaphakileyo zisetyenziswa kakhulu kwiindawo ezisemaphandleni kwaye zenzelwe izinto ezinjengeentlobo ezahlukeneyo zodongwe, amatye kunye neesanti. Iigravel driveways zilungile kwiindlela ezinde zokuhamba, ikakhulu kwilizwe.
Ngelishwa, igrabile yinto ekhululekileyo ke ngokulula ibekwa kwindawo ebekwe kuyo. Oku kunokubangela isidingo sogcino lwegrabile elahlekileyo kunye nokulungiswa kwendlela yokuhamba ukuba kuninzi kakhulu okubalekayo. Ukuba uqhuba ngokukhawuleza ngaphezu kolu hlobo lwendlela yokuhamba apho kunokwenzeka ukuba uqokelele uthuli.
Nangona ukuhlala ixesha elide kusilela, iseyinto enokwenzeka kubantu abafuna ukuqhuba ngendlela efanelekileyo ngethamsanqa kuba ngethamsanqa le indleko yeedola eziyi-0.75 ukuya kwi-3 ngeenyawo zenyawo nganye!
Ukwenza indlela yamatye etyunyuziweyo iya kuba yenye yexabiso elinomtsalane kwaye lihlale ixesha elide ngexabiso eliphantsi kwizinto ezinje ngekhonkrithi okanye i-asphalt. Kungenxa yokuba iyimveliso evunyelweyo, oko kuthetha ukuba izinto ezinje ngamanzi emvula ziya kungena xa kuthelekiswa nokubaleka kwazo. Ilitye elityunjiweyo liya kufana kakhulu nomgaqo wegrabile ngeendlela ezifana nokwakhiwa kunye nemiba yolondolozo.
Iindlela zokuhamba ngamatye ezityunyuziweyo zihlala zenziwe ngamatye, kunye neengqalutye, zahlukile kumhlaba ngoba azibandakanyi isanti kunye neemveliso zodongwe. Oku kuyakwenza ukubonakala kwayo kubukeke ngakumbi. Ukususwa kwekhephu kuya kuba nzima kwaye ekuhambeni kwexesha amatye aya kushukuma anokwenza isidingo sokuphosa amanye amatye phantsi, kodwa oko kuya kuba lulondolozo olungabizi kakhulu. Ngokufana negravel iya kuvusa uthuli kwaye ihlala iqokelela amatye engceni ngaphandle kwayo, kodwa kwilizwe elide lokuhamba ngeendlela akufuneki kube ngumcimbi omkhulu.
Umendo we-basalt otyunyuziweyo uya kufana kakhulu negrabile kunye neendlela ezigungxulweyo zamatye, i-basalt driveways eqhekeziweyo enezinto ezahlukeneyo, kulo mzekelo ityumke ibasalt endaweni yelitye elaphukileyo. Le nto iya kunika inkangeleko ecocekileyo nenhle ngenxa yombala wayo omnyama.
Ukusebenza kwe-basalt etyumkileyo kuyamangalisa, ngaphandle kokuba kukho ukususwa kwekhephu rhoqo. Into emnandi malunga nezinto ezityumkileyo zifuna ukuba zilungiswe kungabikho zilungiso kuba akukho ndlela yokwaphula, eyona nto inokwenzeka ngamatye ayawa okanye abambeke kwinto ethile. Ngamaxesha athile ukuphosa ezinye izinto, le ndlela yokuqhuba kufanelekile ukuba uhambe ixesha elide ulapho. I-basalt etyumkileyo yinto enothuli oluncinci kwaye iya kusetyenziswa kwiindawo eziphezulu kunye neendlela ezinde zokuhamba.
Indawo yokungcola eya kuba yeyona ilula, kunye neyona ndlela ingabizi kakhulu yokufaka. Uninzi lwexesha, ubumdaka sele bukhona, vele uqhube ngaphezulu kwayo kwaye iya kushiya umkhondo wamavili kwaye ibe yindlela yokuqhuba.
Kukho ezinye izinto ezisezantsi kule mpendulo ibonakala ilula kwindlela yokuqhuba. Apho kukho ukungcola nemvula, kubakho nodaka. Indlela yokuhamba yobumdaka iya kujika kwindlela yodaka xa imvula iqala ukuhla enokubangela kwaye ikhuphe izithuthi ezincinci. Ukuhamba ngendlela yokungcola kuya kuba, kulungile, ukungcola okuncinci. Uthuli lunokuvuthuza lomoya okanye xa iimoto zihamba phezu kwalo.
Rhoqo abantu baya kuqala ngendledlana yokuhamba ngendlela kwaye xa sele befumene imali ethe kratya ukuyichitha kwiprojekthi, yongeza ilitye okanye igrabile ngaphezulu kwayo ukongeza uzinzo olongezelelekileyo. Kwangokunjalo, indlela yokuqhuba yengca iya kuba sisisombululo nje esilula nesilula, kule ndawo indawo igqunywe ngengca endaweni yokungcola.
Ezi ntlobo zihlala zisetyenziswa kuseto lwelizwe kunye nezixhobo ezahlukeneyo zokuqhuba ngapha nangapha. Iindawo ezithile zokuhlala ziya kufuna ukuba kubekho indawo egangathiweyo njengoko indlela eya kuthi ithathe ezi ntlobo zeendlela zokubaleka zibaleke.
Olunye uhlobo lwangoku lokungabinanto emdaka yikhonkrithi yangoku kunye nengca yokuqhuba. Ukufumana olu luyilo umntu kufuneka agalele iipavile zekhonkrithi kwimilo oyifunayo kwaye emva koko utyale ingca phakathi. Ingca kunye nekhonkrithi yokuqhuba isitayile kwaye izisa uyilo lwendalo kunye nolwangoku ngaphambili.
Ungaphazami njengoluqobo lweglasi onokuthi uqhube kuyo; Iglasi yokurisayiklisha ngokutsha indlela ebukeka ngayo ifana nomzobo owenziwe ngeglasi eyenziwe yaphinda yavuselelwa kunye nentlaka. Izinto ezenziwayo kule ndlela yokuhamba ziya kuvumela imibala eyahlukeneyo onokukhetha kuyo, ngokusekwe kwimibala yeglasi ekhoyo.
Ezi ndlela zokuhamba zinobuhlobo kwindalo esingqongileyo kunye nezinto ezisetyenzisiweyo zeglasi ezisetyenzisiweyo, ezinokuba sisixhobo esikhulu kwabo banomdla wokugcina okusingqongileyo. I-resin kumxube iya kongeza ukuzinza okukhulu kwimveliso, okwenza ulondolozo lwendlela yokuhamba lube mncinci kuye.
Xa kuziwa kwixabiso lemvelo, imveliso entle ifika kwi $ 9 ukuya kwi-18 yeedola ngeenyawo. (xa kuthelekiswa necobblestone kwaye isipaji sakho siza kutsiba ngovuyo!) Olu khetho lunokukhethwa kuseto oluninzi kuba ayiloxabiso eliphezulu ngokuhlekisayo kwaye liza kongeza ukubamba okuhle kuso nasiphi na isicwangciso somhlaba.
Ukuba ukukhetha nje omnye ngumsebenzi onzima kuwe, emva koko indlela exubeneyo yokuqhuba inokuba ilungile! Kwindlela yokuxubeka kwendlela onokukhetha kuyo nakweyiphi na indlela eyahlukileyo yokuhamba kunye nokuzidibanisa. Mhlawumbi uyayithanda imbonakalo yelitye elixhonyiweyo kodwa ixabiso lincinci kuyo yonke iprojekthi, ungadibanisa i-asphalt okanye ikhonkrithi yokuhamba kunye nomda wecobblestone! Unokwenza ukungcola okanye igrabile yokuhamba ngendlela edweliswe ngeepheyiji, ukugcina amaxabiso ezantsi ngelixa usenalo ulwakhiwo.
Amaxabiso kwezi ntlobo zeendlela zokuhamba aya kwahluka kakhulu ngokusekelwe kwizinto ezikhethiweyo. Rhoqo olu hlobo lokuhamba lukhethwa ukonga iindleko kunye nesitayile esigcinwe engqondweni.
Ukugcinwa kunye nobude bobomi be-driveway kuya kwahluka kakhulu ngokusekwe kwizixhobo, ke ukuphanda into nganye ngaphambi kokukhethwa kuya kuba linyathelo elibalulekileyo. Ukuba esinye sezixhobo siza kwanda kwaye singene kwisimo sezulu kwaye esinye isixhobo sihlala sihleli endaweni efanelekileyo kuya kufuneka uthabathe amanyathelo okuthintela ukungonakalisi komnye umphezulu. Ukugcina enye into kunokuba yingozi komnye, umzekelo iipavumente ziya kudinga ukutshayelwa ngamanye amaxesha, kodwa ukuba ubungazidibanisa nendlela yokungcola, ukutshayela indlela emdaka akusayi kuba sisigqibo sobulumko.
Igrabile kunye namatye asetyenziselwa ukuqhuba aya kuthi ahlelwe ngokweendidi zamatye afakiwe. Ngokwesiqhelo xa kusenziwa indlela, kusetyenziswa amabakala ahlukeneyo. Rhoqo umaleko osezantsi uya kusebenzisa ilitye le-3, eli iya kuba ngamatye aphantse abe zi-intshi ezi-1 ukuya kwezi-2 ububanzi. Olunye ululeko oluqhelekileyo olusetyenzisiweyo luya kuba libanga lesi-4 elinokuba ngamatye alinganayo ebhola yegalufa.
Kwinqanaba eliphezulu lamatye angama-57 kunye no-411. 57 iya kutyunyuzwa ngomatshini kwaye iyakulingana nebhola yegolide. Ubume obuphezulu buya kuba yi-411 encinci kwaye obunobumba oburhabaxa ngakumbi. Ngamanye amaxesha xa kusongezwa ezinye izinto zokuhombisa abantu bongeza amatye omlambo, iitshipsi zemabhile, igrafu, okanye inkqubo yenkwali.
Iindidi zamatye ezikhethiweyo ziya kuthi zixhomekeke nakoluphi uhlobo lwendlela oyikhethayo. Kwiindlela ezithile zegrabile uya kufuna amatye amakhulu, ukugubungela indawo enkulu. Kwiindlela ezincinci eziqhutywa ngamatye amancinci ziyakwazi ukusetyenziswa kuba azizukuphazanyiswa ngabaqhubi abanesantya. Uhlobo ngalunye okanye ilitye liya kuba nembonakalo eyahlukileyo eya kuba sisigqibo esikhulu. Umzekelo, ukukhetha phakathi kwelitye elityumkileyo kunye ne-basalt etyunyuziweyo iya kuba sisigqibo sobuhle kuba zombini izinto zinempawu ezifanayo kunye nexabiso elifanayo.
Iindleko yenye yezona zinto zibalulekileyo kuyo nayiphi na iprojekthi yoyilo lwasekhaya. Into malunga neendlela zokuhamba zinokuba yiprojekthi encinci okanye iprojekthi enkulu, kuxhomekeke kubude, imilo kunye nezinto eziyiprojekthi. Abo banee-driveways ezinde baya kuhlala bebambelela kwiindlela ezisezantsi zeendleko ngelixa iindlela ezincinci zinokufumana ubuchule ngakumbi, kuba banendawo encinci yokugubungela. Ezinye zeendleko ngokubanzi zokuba uqalise zezi zilandelayo.
Iindleko zekhonkrithi zokuqhuba: Ngokwesiqhelo malunga ne- $ 3- $ 10 ngonyawo wesikwere.
Iindleko zendlela ye-Asphalt: Ngokwesiqhelo malunga ne- $ 3 ukuya kwi-5 yeedola kwenyawo nganye.
Iindleko zendlela yokuqhuba: Ngokuqhelekileyo malunga ne-0.75 ukuya kwi-3 yeedola ngeenyawo.
Iindleko zokuhamba ngepavile: Ngokwesiqhelo zimalunga ne- $ 2 ukuya kwi- $ 10 ngeenyawo zenyawo nganye kwizikhuselo zodwa, kwaye malunga ne- $ 30 ukuya kwi-40 yeedola zokubekwa nokufakwa.
Iindleko zeglasi ezihlaziyiweyo ezihlaziyiweyo: Ngokwesiqhelo malunga ne- $ 9- $ 18 ngeenyawo zenyawo nganye.
Iindleko zokuhamba kweCobblestone: Ngokwesiqhelo malunga ne- $ 20- $ 70 ngeenyawo zenyawo nganye.
Iindleko zezitena zokuqhuba: Ngokuqhelekileyo malunga ne-10 ukuya kwi-30 zeedola ngeenyawo zenyawo.
Gcina ukhumbula ukuba indlela eqhelekileyo eya kulungela iimoto ezimbini ecaleni iya kuba malunga ne-20 ukuya kwi-24 yeenyawo ububanzi kunye ne-30-35 yeenyawo ubude (kuxhomekeke ekubeni ikude kangakanani igaraji esitratweni). Ukuphindaphinda oku ngexabiso kuya kukunika uqikelelo olubi malunga nokuba ungakanani umgaqo oza kukuhlawula ngokubanzi.
ubhala njani isicakakazi sentetho yokubekeka
Kukho ezinye izinto ezininzi eziza kubangela ukuba ixabiso lendlela yokuhamba liyehla. Ukongezwa komhlaba, uhlobo lwezixhobo ezisetyenzisiweyo, okanye izinto ezinje ngokudibanisa isango lokuqhuba Ukufakwa kuya kuba yinxalenye enkulu, ngakumbi kwipavile enzima njengezitena kunye nelitye, kulungile ukufumana izixhobo kunye nenqaku lokufaka ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela. Ukwenza iprojekthi uyenzele ngokwakho iprojekthi kunokugcina ezinye iirandi (oko kukuthi, ukuba ulunge ngokwaneleyo).
Ngamanye amaxesha ukuchitha imali eninzi ngaphambili kuya kukugcina ekuhambeni kwexesha. Umzekelo, ezinye izinto zibiza kakhulu kuba zomelele kwaye zihlala ixesha elide. Oku kuya konga kulungiso lweendleko okanye ukwenza kwakhona yonke indlela, kwaye ekuhambeni kwexesha oku kunokuba sisisindisi semali. Enye ingcinga eya kubangela ukuba amaxabiso atshintshe sisitayile nombala, ngelixa uninzi lweemveliso zinemibala yazo esemgangathweni, amasiko nawo ahlala ekhona, kodwa ngentlawulo.
Emva kokukhetha uhlobo lwendlela oza kuyisebenzisa, ukukhetha imilo kufuneka kube yimpepho. Ngokwesiqhelo, luhlobo olunye kuphela okanye zimbini iintlobo ezinokwenza intsingiselo nakweyiphi na imeko. Oku kwenza ukuba kube lula ukukhetha kwindawo yakho! Kwakhona qaphela ukuba iindawo ezithile ziya kuba nemimiselo okanye imigaqo malunga nokuba zingaphi iindawo zokuphuma kunye neendawo zokungena ekungeneni kwendlela. Ukujonga iikhowudi zasekhaya ngaphambi kokwakha indlela entsha eya kukugcina! Ezinye zeendlela eziqhelekileyo zokuhamba ngeendlela zilandelayo:
Indlela echanekileyo yokuhamba ngendlela intle kakhulu ngendlela evakala ngayo, ngqo. Ezi ziya kusetyenziswa xa kukho umgama omfutshane ukusuka kwisitalato ukuya kwigaraji, zihlala zineyadi encinci. Oku kuyakugcina indlela elula ilula kwaye isebenze ngelixa ungathathi kakhulu isithuba esinexabiso leyadi. Indlela ende yokuhamba inokusetyenziswa kwaye iya kunika i-vibe efana ne-estate. Iindlela ezinde ezithe nkqo zihlala zihonjiswe ngemithi okanye izityalo, zikhokelela umqhubi endlwini, ziyenza ibonakale ijolise ngakumbi kwaye ibeka ikhaya embonisweni.
Isetyhula yokuhamba yindlela ethandwayo kuba ihlala ingafuni ukuba umsebenzisi abeke umva umva kwisithuthi. Ezi ntlobo zeendlela zokuhamba zinokuba nokungena kwezitalato ezimbini kwaye zikwimo yesetyhula. Iisetyhula zokuhamba nazo ziyafumaneka kwimilo yeenyembezi apho indlela iya kuba nenqaku elinye lokungena esitratweni kuba iyadibana nayo ngaphambi kwelo xesha.
Ukujikeleza kwesetyhula kufuna ipropathi enkulu ngenxa yokufuna ukwenza iluphu ngaphandle kokujika okungqongqo. Ezi driveways zinokucwangciswa ngeendlela ezahlukeneyo, kuxhomekeke kubeko lwesiza, banokuba nazo kunye nokungena ngaphezulu kwesitalato, okanye bajikeleze kwicandelo elinye. Isetyhula yokuqhuba iya kuvumela kwakhona iimpawu zokwenza imbonakalo yomhlaba ukuba ibe yindawo ekugxilwe kuyo. Isiqithi esihamba ngesiqithi singasetyenziselwa njengendawo ekugxilwe kuyo kwimifanekiso eqingqiweyo okanye emithonjeni ukwenza umbono wokuqala.
Iindlela ezimile okwe-U zikwakhona njengoko zivakala, zimile njenge-U. Ezi ndlela zokuhamba nazo zilungile kuba azidingi ukuba umqhubi abuye umva. I-U ezimilise iindlela zokuhamba ziya kuba namanqaku amabini okufikelela kwisitalato. Ezi zihlala zisetyenziswa xa isangqa esipheleleyo sendlela esihamba kuyo ayisiyiyo inketho ngenxa yendawo. Oku kusaza kunika umqhubi indlela yokuphuma ngaphandle kokuxhasa kwaye kuya kuthintela ukudideka kwamanqaku aliqela ajike ajike.
Indlela evaliweyo egoso isebenza kwiimeko ezininzi. Ngamanye amaxesha ukufikelela kwisitalato akuhambi ngqo kwigaraji, ke ukusetyenziswa kwendlela ethe ngqo akunakusebenza. Ezinye iimeko zinokubandakanya imiqobo yendalo kunye nezinto ezenziwe ngumntu eziya kuthintela umgca othe ngqo ukusuka kwisitalato ukuya kwigaraji. Xa usenza indlela egoso-goso, kufuneka igcinwe engqondweni ukuba zininzi iintlobo zezithuthi nabaqhubi abaya kuthi basebenzise loo ndlela kwixa elizayo. Oku kuya kuthetha ukuba uya kufuna ukunqanda kunye nejika ezibukhali okanye ukuba neegophe kufutshane kakhulu nokungena okanye ukuphuma kweendawo zokuhamba.
Inkcazo iphinda ilandele igama kunye nendlela eyi-Y emise okweleta eya kumila njengonobumba y. Oku kuyakuba nokungena kwesitalato esinye kwaye indlela eya kuyo iya kwiindawo ezimbini. Oku kunokuba kukho iigaraji ezimbini okanye ukuba kukho igaraji kunye nendawo eyongezelelweyo yokupaka into efana neRV okanye isikhephe. Isenokuba ngumbono olungileyo ukuba unabantwana abafuna ihupula yebhasikithi (eya kubagcina ekubetheni imoto yakho!). Ezi zinokusetyenziselwa ukuba kukho indalo okanye into eyenziwe yindoda endleleni, efuna ukwaphula indlela eya phezulu. Ezi ziimilo eziqhelekileyo azixhaphakanga, kodwa zisebenzisa kakhulu.
Ndwendwela eli phepha ukuze ubone igalari yethu iindlela zangoku yezinye izimvo zoyilo.
ixesha elide kangakanani ulwamkelo lomtshato
Yimalini utywala bokuthengela umtshato
Umama o-turquoise womtshakazi unxiba
entlango yokuma komhlaba
ibhodi yebhodi enophahla lwophahla
yintoni oza kuyinxiba kumtshato oqhelekileyo wokuwa